by Trey Hilburn III Aogositra 5, 2021 20,493 hevitra
Afaka nahita aho Mody ao anaty haizina tao amin'ny Festival Film Chattanooga. Nahagaga ny indroa ny fizahana tamin'io alina io. Indray mandeha satria ilay fandefasana miafina goavambe sy sarimihetsika fanidiana alina, ary ny roa dia fijanonana tsy misy fijanonan'ny hadalana tsy miato. Eritrereto, Ny Hitcher. Saingy, tsy misy toerana hiainana. Ny tranofiara farany farany dia mahay maneso ny sarimihetsika nefa tsy manome be loatra.